သင်၏ PC မှာ virus ကူးစက်ခြင်း ခံရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင် | mmCert
သင်၏ PC မှာ virus ကူးစက်ခြင်း ခံရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်
သင်၏ကွန်ပျူတာမှာ virus ကူးစက်ခြင်းခံရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ ဆိုရင်…
သင်၏ကွန်ပျူတာမှာ attachment file သို.မဟုတ် virus ပါတဲ့ program တစ်ပုဒ် ကို run လိုက်ခြင်း၊ ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ virus စတင်သည့်တိုင်အောင် သင်ဟာ သတိပြုမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။သင့်၏ system ဟာvirus ကူးစက်ခြင်းခံရပြီဆိုရင် သင်္ကေတ တချို.ပြပါတယ်
● သာမန်ထက် ပိုနှေးပြီး အပြောင်းအလဲမရှိစွာ run နေခြင်း။
● တုန်.ပြန်မှု နှေးခြင်း သို.မဟုတ် မကြာခဏ lock ကျခြင်း။
● မိနစ် အနည်းငယ်တိုင်း restart ကျခြင်း နှင့် crash ဖြစ်ခြင်း။
● သူကိုယ်တိုင် restart ကျပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် run ဖို. Fail ဖြစ်နေခြင်း။
● Application များ မှန်ကန်စွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်း။
● Disk သို.မဟုတ် disk drive များ အသုံးပြုလို.မရခြင်း။
● Print ထုတ်ခြင်းကို မှန်ကန်စွာ မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
● တစ်မူထူးခြားသော error message များတွေ.ခြင်း။
● ထူးခြားကွဲပြားသော menu နှင့် dialog box များ တွေ.ခြင်း တို.ဖြစ်ပါတယ်။
● သင့်ကွန်ပျူတာ၏ လုံခြုံမှု တိုးတက်နိုင်ရန် နှင့် virus ကူးစက်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို သင့် system up-to-date လုပ်ပြီး စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊ လက်ရှိ antivirus software တစ်ခုကို ဝယ်ယူအသုံးပြုပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်၎င်း လျော့ချပေးနိုင်ပါသည် ။
အကောင်းဆုံး လက်တွေ.ပြုလုပ်မှု အနည်းငယ်ကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထား ပါသည်။
● အင်တာနက် firewall ကိုအသုံးပြုခြင်း။ (Note: Windows XP with SP2 hasafirewall already built-in and active).
● Microsoft update ကိုသွားခြင်း နှင့် automatics updates ကို on ခြင်း။ ( If you've installed Office 2003 or Office XP, Automatic Updates will also update your Office programs. If you have an earlier version of Office, use Office Update.)
● စံသတ်မှတ်ထားသော antivirus software လုပ်ငန်းမှ ပုံမှန် လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်း အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လက်ရှိ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ခြင်း။
● သင်မသိသော တစ်စုံတစ်ယောက်မှ attachment file ဖြင့်e-mail ပို.လျှင် ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ပါနှင့်။
● ဘာ attachment လဲ အတိအကျမသိဘဲ သင်သိသော တစ်စုံတစ်ယောက်မှ attachment file ဖြင့်ပို.သော e-mail ကိုဖွင့်ဖတ်ခြင်းမှ ရှောင်ပါ။
သင် virus ကို ဖယ်ရှားဖို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုရင်…
သင့်ကွန်ပျူတာကို update ပြုလုပ်၍ ဖြတ်သန်းခြင်း နှင့် ကုမ္ပဏီများစွာမှ အခမဲ့၊ စမ်းသပ်ကာလ၊ ဈေးသက်သာသော antivirus tool များ မှာယူသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်လဲ အမြဲတစေ မလိုအပ်သော software များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ (ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။)
Virus ကို ဖယ်ရှားဖို့ ကူညီရန်အချက်(၃)ချက် မှာ…
● ကာကွယ်ပေးသော သင့် Personal Computer site ကိုသွားရန် နှင့် နောက်ဆုံး update ကို install ပြုလုပ်ရန်။
● သင်ဟာ ယခုလက်ရှိ antivirus software ကိုအသုံးပြုနေသူ ဆိုလျှင် ထုတ်လုပ်သော web site ကိုသွားပြီး သင့် system ကို scan စစ်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ယခုလက်ရှိ antivirus software ကို
အသုံးပြုနေသူ မဟုတ်ဘူးဆိုလျှင် ပုံမှန် လစဉ်ကြေး နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်း ရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် သင့်system ကိုချက်ချင်း scan စစ်ပေးပါ။
● Malicious software removal tool ကို download,install နှင့် run ရပါမည်။ (for Microsoft Windows XP or Windows 2000 users). ၎င်း tool ဟာသင့် system ကိုရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး၊ virus ရှိနေခြင်းကို ဖယ်ရှားဖို့ ကူညီရန် သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သင့် computer ကို အသုံးမပြုနိုင်တော့ဘူးဆိုလျှင် antivirus software နှင့် install ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်…
သင့် computer ဟာ virus ကိုက်နေပြီဆိုရင် သင့် system ကို update သို့မဟုတ် tools ကို download လုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေပါလိမ့်မည်။ ဒီအခြေအနမှာဆိုရင် သူငယ်ချင်းရဲ့ သို့မဟုတ် တခြား computer တစ်လုံးကို အသုံးပြု၍ tools ကို disk ပေါ်သို့ download လုပ်ပါ သို့မဟုတ် အကူအညီအတွက် Microsoft services support ကို ဆက်သွယ်ပါ။
how do u know ifavirus has your computer.pdf